अचानक पुन्य गौतम र कुमारको पर्यो लफडा,सचिन परियारको बिषयमा फेरी किन यस्तो भने ? दिए कडा जबाफ (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
अचानक पुन्य गौतम र कुमारको पर्यो लफडा,सचिन परियारको बिषयमा फेरी किन यस्तो भने ? दिए कडा जबाफ (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki June 4, 2021
काठमाडौँ । पुण्य गौतम विश्वास केही समय अगाडिसम्म सिपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य थिए । माले छाडेर उनी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे । एमाले र माओवादीको एकता भएपछि एमालेका तर्फबाट उनलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरियो । मनोनयन भएलगत्तै उनको केन्द्रीय सदस्य पद खोसुवामा पर्यो ।
अहिले गौतम नेकपा अन्डरलाइनमा छन् । केन्द्रीय सदस्यको पद खोसिएपछि उनले आफूमाथि बज्रपात भएको बताए । मुखमा आइसकेको भाग पापीहरुले खोसेर लगेको पनि उनको टिप्पणी थियो । पद खोसिएपछि गौतमले आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमा राखे ।त्यसमा उनले आफू योग्य भएर पनि केन्द्रीय सदस्य हुन नपाएको, मुखैमा आएको भागमा सत्रू लागेको भन्दै उनीहरुलाई सुनको पलङमा सुत्ने अवसर मिलोस् तर निद्रा नआओस् भन्दै उनले ‘आशिर्वाद’ दिए । सचिन परियारको बिषयमा कुमार राई र पुन्य गौतमले आफ्ना कुरा राखेका छन ।